Halatra lavanila maitso tany Sava - Vinantolahy maty voatifitra tao anaty tanimbolin’ny rafozany
Misesisesy ny halatra lavanila any amin’ny Faritra Sava tamin’ny herinandro lasa teo. Maro ihany koa ny olona maty iharan’ny fitsaram-bahoaka sy tratra ambodiomby eo ampangalarana lavanila tsy matoy tao amin’ny distrikan’i Sambava. Matetika dia tsy olona lavitry ny fianakaviana no mpiray tsikombakomba amin’ireo jiolahy mangalatra lavanila tato ho ato izay fa ao anaty fianakaviana ihany izy ireo. Mafampana ny resaka halatra lavanila maitso ity any amin’ny Faritra na manao ny ezaka amin’ny fiarovana azan y tompon’andraikitra tsirairay fa indrindra ireo vondrona mpandraharaha amin’ny famongorana sy hanatsaharana tanteraka ny halatra mialoha’ny potoam-piotazana.
Ny sabotsy lasa teo dia raim-pianakaviana iray no maty voatifitra tao anaty tanimbolin- drafozany. Hatreto mbola tsy fantatra ny tena zava-nitranga tamin’io fotoana io fa manahy kosa ny fianakaviana fa ny mpiambina no nahavanon-doza satria tsy hita izay nanjavonan’izy ireo hatramin’izao. Araka ny fanazavana azo dia lasibatry ny jiolahy ny vokatra lavanila’ity fianakaviana iray ity isan-taona ka voatery nanafatra mpiambina telo lahy avy any amin’ny toeran-kafa ny tompon-tany. Ankoatra ireo mpiambina telo izay anefa dia manampy azy ireo ihany koa ny zanany lahy iray sy ny vinantolahiny roa, Raha ny fitantaran’ireo roalahy dia sendra variana kely fotsiny izy ireo kinanjo tampoka teo poabasy no nanaitra azy roa ka rehefa nojereny ny zava-misy olona efa lavo amin’ny tany fa miala aina no hitany teo. Avy hatrany dia nihazakazaka niakatra ny tanàna nampandre ny fianakaviana ny iray raha toa ka nikaroka ireo mpiambina telo kosa ny vinantolahy iray. Tsy hita teo amin’ny manodidina izy ireo ary noentiny niaraka aminy avokoa ny basy sy fitaovana napetraka natao hiarovan-tena rehefa misy ny fanafihana mandritra ny fiambenana. Noho izany ho an’ireo fianakaviana niharam-boina dia izy telo lahy nandositra ireo no nitifitra nahafaty ny havany fa tsy dahalo hafa. Mety tratrany saika hangalatra lavanila na nandre ny teti-dratsin’izy ireo ity farany ka voatery tsy maintsy novonoina na ihany koa tsy nanaiky ho iray loha tamin’izy telo. Namela kamboty roa kely ity raim-pianakaviana namoy ny ainy ity. Efa eo ampelatanan’ny mpitandro filaminana ao Ampanefena kosa ny raharaha amin’ny fikarohana ireo mpiambina telo mba hahafantarana ny tena zava-niseho.